Kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo si xoogan ugu dagaalamaya xiddig ka tirsan Barcelona – Gool FM
(England) 06 Luulyo 2019. Kooxda Arsenal ayaa dooneysa inay kula dagaalanto dhigeeda Manchester United soo xero galinta daafaca naadiga Barcelona, inta lagu gudi jiro suuqan kala iibsiga ee xagaaga.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Daily Mail” ee dalka England Manchester United ayaa diirada saareysa soo xero galinta xiddiga reer France ee Samuel Umtiti xagaagaan.
Red Devils waxay si xoogan isugu dayeysaa inay ku kanciso Umtiti inuu kasoo dhaqaaqo garoonka Camp Nou, balse kooxda Arsenal ayaa dhankeeda si layaab leh xiiso kaga muujisay adeega daafacan.
Arsenal ayaa heysata miisaaniyad dhan 45 milyan oo ginni ay u qorsheesay suuqan xagaaga, waana qiimo ka yar marka loo fiiriyo lacagaha la filayo in Barcelona ay codsan doonto si ay u iibiso daafaceedan reer France.
Arsenal ayaa la rajeynayaa inay isku dayi doonto in Samuel Umtiti ay ku qaadato heshiis amaah 1 ilaa iyo 2 xili ciyaareed ah, iyadoo heshiiska uu qeyb ka noqon doono inay xaq u yeelato in si toos ah ay u iibsato gabagabada heshiiska amaahda ah.
Inkastoo Samuel Umtiti uusan dooneynin inuu ka dhaqaaqo kooxda Barcelona, hadana waxaa suuragal ah in markale uu ka fikiro mustaqbalkiisa, maadaama la fahansan yahay in tababare Ernesto Valverd uu markale xili ciyaareedka cusub si weyn ugu tiirsanaan doono adeega labada daafac Clément Lenglet iyo Gerard Piqué.
“Dhibaato xoogan ayaan ku qabay Cristiano Ronaldo”- Toni Kroos